Vaovao - hisafidy sticker sticker ihany ve ireo olona nanaovana tombokavatsa？
Fantatry ny rehetra amin'ny teny hoe tatoazy, sa tsy izany? Amin'izao fotoana izao, eo imason'ny ankamaroan'ny olona, ​​izay rehetra manana tatoazy amin'ny vatany dia horaisina ho toy ny olona ara-tsosialy. Betsaka ny olona no nisafidy ny hanao tatoazy hanenjehana ilay antsoina hoe «cool» eo imasony. Ny tatoazy dia nanjary fironana ankehitriny, toy ny zazavavy ihany. Samy manana ny fony ho tia hatsaran-tarehy ny tsirairay, saingy tsy misy fanenenana eto amin'ity izao tontolo izao ity.
Fa maninona no hoy ianao? Satria manenina izany ny ankamaroan'ny olona aorian'ny fanaovana tatoazy. Maharary rehefa mahazo tatoazy, ary mbola marary kokoa aza rehefa manaisotra ny tatoazy. Mpivady tanora maro no manao zavatra adaladala mandritra ny vanim-potoana fitiavana, toy ny fanaovana tatoazy mpivady, fa ahoana kosa rehefa misaraka? Mijanona ho fahatsiarovana? Tsy mandeha koa izany, satria raha tsy manana an'ity ianao dia hanana ny manaraka. Rehefa manala ny tatoazy ianao dia hanenina.
Hisafidy sticker amin'ny tatoazy ve ireo olona nanaovana tatoazy?
Voafafa ihany koa ny tatoazy raha manjavona ny loko, ary miova ny lamina raha tsy tianao izany. Tompon'andraikitra tena tompon'andraikitra ny milaza aminao fa tsy afaka manolo ny tombokavatsa ny sticker amin'ny tatoazy. Ny sticker sticker dia ny olon-tiana, ary ny tatoazy no olona miaraka amin'ny fiainana iray manontolo. Mazava ny fahasamihafana misy eo amin'izy roa. Matetika ny olona rehetra dia miteny hoe: misotro toaka ve ianao? Manana tantara momba ny tatoazy aho ...